5T vangapiwa Rotator - China Wuxi Success Machinery
Self tsitsi Rotator
Pachikwata kumusoro Welding Rotator
Kukura Line System
Gear kurereka positioner
3 akabatana hydraulic posiitoner
Head & Muswe wemari positioner
Urefu chinja positioner
3000kg 3 akabatana hydraulic positioner
100T Kutevedzera vakakwira Welding Rotator
60T kwakajairika nomoto rotator
5T vangapiwa Rotator
Kutakura: matani 5 kunonyanyisa
Midziyo dhayamita: Min.150mm ~ Max.900mm
Kutenderera nokumhanya: 100 ~ 1000mm / Maminitsi VFD
Kutenderera simba: 2 * 0.37 KW pamwe kurudza kutonhora
Roller mavhiri: PU (Polyurethane mavhiri)
Chinja nzira: Lead sikuruu
Control hurongwa: Remote ruoko kudzora bhokisi
Voltage: 110V ~ 575V zvose iripo.
Delivery nguva: padanda
FOB Price: . 8, *** 00 USD
Vangapiwa rotator ari zvikuru yakagadzirwa uye kugadzirwa kuti chinangwa Rokusangana zvinodiwa dzekugonesa negoho, kuwedzera zvokuti automatic, nokuderedza ndiri weredha kuti vanoshanda zvakanyanya uye achichinja kuita muridzo unoridzirwa workshop prefabrication. It chinja ngarava dhayamita Via vatungamirire sikuruu, uye kugadzira workpiece kubvapo, saka chichiri kushandiswa nomoto.
Pano Pasi 5T vangapiwa Welding Rotator Specification:
kutakura matani 5 kunonyanyisa
midziyo dhayamita Min. 150mm ~ Max.900mm
kutenderera havukavu 100 ~ 1000 mm / Maminitsi VFD
kutenderera simba 2 * 0.37kw pamwe kurudza kutonhora
Roller mavhiri PU (Polyurethane mavhiri)
Control nzira Remote ruoko kuzvidzora
chiyamuro Voltage 110V ~ 575V Single / 3 Pasika 50 / 60Hz
setifiketi CE mvumo
Kutungamirira Screw Kugadziridzwa vangapiwa Pipe Turning Rolls Description:
1. Special magadzirirwo nomoto wekushanduka chinotenderera achatsigira pasi nenyere kana nyere wako zvakare kureba.
2. vangapiwa nyere rollers akashongedzerwa Welding pfuti pamusoro ruoko kuti otomatiki nomoto, ccustomer anogona kuchinja chakanamwa nomoto pfuti 10 M mukati Via ruoko kudzora bhokisi.
3. musono Tracker dziripo kuchinja musono nomoto.
4. Control Way: Hand kudzora bhokisi.
5. Cutting Way: Automatic nomoto
6. Welding positioner chinosimudzira nenyere vaendese uye nomoto.
7. Welding ruoko abate chakanamwa nomoto pfuti kuti otomatiki nomoto.
8. nomoto Our Electric hurongwa anobva Schneider
All Welding Rotator Turning Rolls, Small uye Large Rotator Spare Parts Brand:
1.Our vangapiwa nomoto chinotenderera Inverter anobva Danfoss / Yaskawa.
2.Our vatungamirire sikuruwa kugadziridzwa nomoto rotator Motor anobva Invertek.
vangapiwa nyere 3.Our pakona akakungurutsa yokuderedza anobva China muchiso.
1. Rinoshandiswa weld, chiPolish uunganidze humburumbira-anoshongwa.
2. Welding Rotator mikuru kushandiswa humburumbira nomoto, akadai Marine, Oil & Gas; Offshore, Plate Heat Exchanger; Mhosva mhepo inotonhorera; Pressure Mudziyo; bhaira; Pipe hurongwa & Steel anoshanda etc.
3. Nokuti car denderedzwa musono nomoto.
4.Chemical & mafuta chekuchengeta tangi azoshandiswa.
Sei Sarudza Wuxi Kubudirira Machinery Equipment CO, LTD.:
1.We vimbiso akatendeseka uye akanaka, ndicho yedu mufaro kukushumirai rako rokutenga consultant.
2.We vimbiso haabati nguva, unhu uye zvakawanda mukanyatsochengeta kushandisa mashoko kondirakiti.
3.Professional uye ruzivo injiniya chikwata kuitira akura akaitwa maumbirwo uye dzemagetsi.
4. Tine zvakawanda zvakasiyana design maererano vatengi nenyere. Kana equipments dzedu pano havagoni kusvika chako chikumbiro, ipapo tichakupai vagoronga itsva kwamuri.
5.Commissioning uye nekuongororwa pamberi pakusununguka.
Our kufanana nomoto muchina chigadzirwa zita inoshandiswa mutopota pakona nomoto:
nomoto rotator, weling positioner, nomoto manipulater, akashandisa nyere akatendeukira mabhanzi, kumanikidzwa midziyo Welding rotator, kwakajairika nomoto rotator, nyere tangi nomoto totator, kutenderera nomoto muchina, Hydraulic Roator For Welding, Sand Blast Turning Roll, Automatic Welding Rollers, Tank Roller Welding Machine , Cylinder Pipe Welding Rotator, kwakajairika Tank Turning Rolls, musoro nomuswe wemari nomoto positioner, hydraulic nomoto positioner, simudza Welding positioer, chinjikira nomoto positioner, Height Kugadziridzwa Welding Positioners, Tendeuka Table Welding positioner, Tendeuka Table Welding positioner, nomoto mbiru tiguu, Auto Welding Boom, Tank makorari Machine, mbiru uye kuwedzera, column uye Boom achifurira, mbiru tiguu ndiri weredha
Previous: 5000kg 3 akabatana hydraulic positioner
Next: Kwakajairika nomoto rotator
1. kwakajairika vangapiwa Yedu nomoto Tank Turning Rolls vose vane mwero kure ruoko kudzora bhokisi uye tsoka chitiviri control.it zviri nyore uye njodzi
2. Wireless / redhiyo ruoko kuzvidzora kuti nyere nomoto vanoshandura rotators dziripo, asi kazhinji nokuda rinorema basa uye refu nenyere / matangi.
1. Kana kuti mumwe / maviri nemhando Welding rotator, ipapo isu acharongedza mumikombe mhosva pamwe kuisa mashoko nokuda LCL kutumirwa.
2. Kana nenyere nomoto rollers arayire uwandu zvinokwana munhu wose mumidziyo, isu acharongedza mumidziyo zvakananga.
3.We kupa 1year guaranty nguva kuti muchina unhu yose.
1. kambani yedu (Wuxi Kubudirira Machinery & Equipment CO., LTD) kunge aivigirwa yedu nomoto rotators kunyika dzinopfuura 30 pose. European & America wemari iripo.
2. Pano pasi nevamwe Tank akatendeuka nomoto mabhanzi kushanda mifananidzo zvose zvinobva vatengi vedu inofambiswa yavo yebasa.
Mexico 30T kwakajairika kutungamirira sikuruwa mutopota nomoto wekushanduka rollers
ITALY 40T uye 100T bhaudhi Kugadziridzwa tangi Welding ROTATORS
AMERICA 40T kwakajairika Pipe Welding ROLLERS kushanda WEHEAVY MIDZIYO.
5000kg Horizontal turntable
1000kg Head & muswe wemari positioner
5000kg Height chinja positioner
200T kwakajairika nomoto rotator
2 × 2 mamita Welding achifurira
5000kg 3 akabatana hydraulic positioner